FIFAMPIARAHABANA TRATRY NY TAONA TENY IAVOLOHA | Madatopinfo
FIFAMPIARAHABANA TRATRY NY TAONA TENY IAVOLOHA
Maro ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika
“Fisandratana mirindra”, io no lohahevitra nandritra ny fampiarahabana tratry ny taona 2017 natao tetsy amin’ny Lapan’Iavoloha ny Zoma 6 Janoary lasa teo. Samy nitanisa ny zava-bita nandritra ny taona 2016 avokoa ireo nikabary nadritra ny lanonana. Tsy vitsy ireo nanararaotra naneho ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena. Anisan’izany i Pastora Mailhol, mpitarika ny fiangonana Apôkalipsy eto Madagasikara: “na dia mbola ao anatin’ny sarotra aza ny raharaham-pirenena ankehitriny dia efa manomboka mihiratra izany, indrindra eo amin’ny lafiny fifandraisana iraisam-pirenena sy amin’ireo mpamatsy vola”. “Mila filaminana ara-politika isika fa raha tsy izany tsy misy zavatra manjary. Ilaina ny fampihavanam-pirenena fa saingy sarotra hampihavanina ireo mpanao politika eto amintsika”, hoy hatrany ny fanampim-panazavany. Ary nohamafisiny ombieny ombieny fa tsy manana olana eo amin’ny mpitondra rehetra nifandimby teto ny tenany.
Anisan’ny tonga namaly ny antso nandritra ny lanonana tony taona teny Iavoloha ihany koa ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny vadiny Lalao Ravalomanana, Ben’ny tanàn’Antananarivo amperin’asa. Nilaza ity filoha teo aloha ity fa vonona ny hiara-hisalahy amin’ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny ny tenany. “Ny toe-tsaina sisa no tsy mampandroso an’i Madagasikara, eo ihany koa ny fampihavanam-pirenena, tokony miresaka. Aleo ny tombotsoam-pirenena sy ny vahoaka Malagasy no jerena”, araka ny nambarany ihany. Samy nilaza ho mbola vonona ny hampandroso ny firenena avokoa ireo Filoha teo aloha tonga teny an-toerana: Filoha Marc Ravalomanana sy ny Filoha Didier Ratsiraka.
Tsy nanatrika ny lanonana fampiarahabana tratry ny taona teny Iavoloha kosa ny Filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Nirina Rajoelina ny zoma lasa teo. Tsy nahitana na iray aza Solombavambahoakan’i Madagasikara sy ireo parlemantera voafidy tamin’ny alalan’ny Antoko politika MAPAR ihany koa teny an-toerana. Naneho ny heviny avy hatrany i Christine Razanamahasoa Solombavambahoaka MAPAR ny faran’ny herinandro lasa teo manoloana ny kabarin’ny Filohan’ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina: “nandiso fanantenana ny kabarin’ny Filoha, ny omaly tsy niova, teo ihany no teo toy ny fisondrotan-karama sy ny fanena-tsazy. Tsy manana fanampahan-kevitra hentitra hiasa ny Filoha”. Andrasan’ny maro hatreto ny mikasika ny fampihahavanam-pirenena izay nodradradradrain’ny Filoham-pirenena nandritra kabariny. Antenaina hitondra fitoniana ara-politika sy vahaolana maro eo amin’ny sehatra isan-karazany ary amin’ireo ambaratongam-pahefana misy eto amin’ny firenana izany.